Astaamaha Olambikada taariikhda oo dhan | Abuurista khadka tooska ah
Taariikhda intii Ciyaaraha Olombikada ayaa loo qaabeeyey oo la abuuray calaamadaha aad u kala duwan oo ku kala duwan magaalo kasta oo lagu qabtay.
Isbedelada ugu horreeyay waxay ahaayeen adeegsiga monochrome iyo xaalad dhab ah oo hay'ad leh oo isbeddelay sannadihii la soo dhaafay iyo u janjeeridda bilicsanaanta iyo calaamadaha midabyo badan oo hadda jira oo ah kan ugu weyn ee weheliya muuqaal casri ah oo cusbooneysiiyay iyo sidoo kale sheeko iyo hadda.
Isbeddelkan ayaa lagu arkay Ciyaaraha Jiilaalka iyo Ciyaaraha Xagaaga oo afartii sanaba mar lagu qabto magaalooyin kala duwan oo adduunka ah.
Isbeddelkan cad ayaa sidoo kale lagu ogaan karaa waxyaabo kala duwan calaamadaha taas oo loo soo jeediyay magaalooyinka kala duwan ee doortay inay u dabaaldegaan dhacdooyinkan isboorti ee waaweyn dalkooda. Noocyada kala duwan ee naqshadaha iyo midabbada ee lagu arkay soojeedimaha kala duwan ayaa ina tusaya sida isbeddelka naqshadayntu u ahayd tan iyo bilowgii Ciyaaraha Olombikada illaa iyo maalmaheena xorriyadda hal-abuurka ay tahay halyeeyada weyn.
sawirro: webdesignerdepot, cssblog, madadaalo, isku darka qabyaaladda, blog.pucp.edu
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » logos » Astaamaha Olambikada taariikhda oo dhan
xulasho aad u wanaagsan